Folkestone, igumbi elikhulu elihle eliqaqambileyo
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguHarry
Eli ligumbi elikhulu elizaliswe ngokukhanya kwindawo yeli lizwe elineebhedi ezimbini ezitofotofo ze-Victorian. Iimpawu ezinje ngamaplanga odonga kunye neepaneli kunye ne-mantlepiece yokuqala ye-victorian yongeza uthando kunye nomlingiswa. Iyahambelana nelaptop (Itafile kunye nezitulo ezibini ezikufutshane nesokethi yombane). Kukho i-wardrobe eyakhelweyo kwaye eyakhelwe kwikhabhathi yokugcina, kunye nesifuba sedrowa kunye neeyunithi ezimbini ezisecaleni kwebhedi. Igumbi lethu eliphindwe kabini Igumbi lezikhova liyafumaneka, sazise nje kumyalezo wakho.
Eli lithuba elihle lolwamkelo lolwakhiwo phezu kwamawa amhlophe adumileyo eDover kumda wedolophu yolwandle iFolkestone, enemiqadi kunye nenani elikhulu lomlinganiswa. Iikhonkco zezothutho ezigqwesileyo zihamba ukusuka kwimizuzu emi-2 kude. Indawo yokuhlala ingaphezulu kwebha kunye nerestuarant ye "The Valiant Sailor". Sikwanayo negumbi le-Owl, igumbi eliphindwe kabini elinebhedi enkulu kunye nezixhobo ezifanayo, nceda usibuze kumyalezo wakho ukuba unomdla wokubhukisha. Abahlali bamkelekile ukuba baodole ukutya neziselo ezinokuthi ziziswe kumagumbi abo.
Kukho ikhitshi eline microwave, iketile kunye netoaster yeendwendwe kunye nokusetyenziswa kwefriji. Zininzi iihambo ezintle kumawa kunye nokuhla kufutshane kakhulu nendawo, eneneni kukho umbono omkhulu weFransi ukusuka kwi-cliff top emva kwe-pub (imizuzu emi-3 kude) ngosuku olucacileyo.
Kukho umnqantsa ukuya kwiibhichi zasekuhlaleni ezithatha imizuzu engama-20 ukuya kuma-30. Kukho into yakhe wonke umntu olapha eFolkestone, ukusuka kwiilwandle ezintle, iindawo zembali ezifana neSikhumbuzo seSizwe esidumileyo ukuya kwabambalwa (nje ecaleni kwendlela ukusuka kuthi, okanye uthathe uhambo oluya phezulu) kunye neCreative Quarter edumileyo eyi-30 mins yokuhamba ukusuka Indawo yentselo ecaleni konxweme oluhle lwaseKent. Kwakhona iHarbour Arm eyaziwa ngokulinganayo eneebhari ezininzi ezinomdla, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. I-Folkestone ine-buzz yasekuhlaleni ethandekayo, abantu baluncedo kakhulu kwaye bayancokola kwaye idolophu ikhawuleza i-30 ukuya kwi-40 yokuhamba ngomzuzu ukusuka kwindawo ye-pub okanye ukukhwela ibhasi ngokukhawuleza ukusuka kwisikhululo sebhasi esiku-2 imizuzu kude. Ikhitshi lethu ngoku lineemicrowave, itoaster kunye neketile yombane, isinki kunye namanzi ashushu nabandayo. Wamkelekile ukusebenzisa izixhobo ezikhoyo.
Indawo yokupaka simahla eseyadini – ineendawo eziyi-30
Ubumelwane bukwi-East Downs indlela, umzila odumileyo wokuhamba e-Kent. Imbono engaphaya kwe-bay, iilwandle kunye nedolophu iyaphakamisa kwaye iyaphawuleka. Ukusuka emva kwe-pub kunye nezakhiwo ezikufutshane unokuhamba uye kwi-cliff top ngemizuzu emi-3 kwaye ujonge iFransi kwimozulu entle (Nceda uqaphele iindawo eziphakamileyo ezingabiyelwanga eziyingozi kwaye unxibe i-footware efanelekileyo, engakhuselekanga kubantwana kunye nezilwanyana ezingekho kwisikhokelo, akucebisi ebusuku. !).
Sikufuphi nesikhumbuzo seCapel Le Fern esidumileyo kunye nemyuziyam enokufikelelwa kwindlela esemva kwe-pub ekhankanywe ngasentla. Kukho into yakhe wonke umntu olapha eFolkestone, ukusuka kwiilwandle ezintle, izibuko, iindawo zembali kunye neendlela ezinqabileyo zeFolkestone Creative Quarter edumileyo eyi-30 mins ukuhamba ukusuka kwindawo egudle unxweme oluhle. Kukwakho neemarike zamafama kunye neemarike zobugcisa kwindawo yasekhaya. iibhasi zibaleka ukuya kwindawo yokuthenga kunye neelwandle ukusuka ngaphandle kwendawo yokusela. Yimizuzu esi-7 yokuhamba ukuya kwivenkile yelali yasekhaya. Ngamafutshane: iilwandle zeFolkestone kunye nechweba, i-Creative Quarter, i-Battle of Britain Memorial kunye nemyuziyam e-Capel Le Fern, ivenkile yelali yasekuhlaleni, i-Clifftop Cafe yendawo, i-East Downs Way kunye nokunye okuninzi ukuphonononga kunye nokonwabela!
Kuya kuhlala kukho umntu okhoyo apha ukuze aphendule imibuzo yakho malunga nommandla wendawo kwaye akhombe kwicala lezona mpawu zibalaseleyo zefolkestone kufuneka zinikeze. Kwakhona ukutya kunokusiwa kwigumbi lakho. Izidlo ezi-3 ngosuku ziyafumaneka ziziswa emnyango wakho (ulungiselelwe kwangaphambili). Amalungiselelo ahambelana nawe angaxoxwa. Singakuhlalisa kwi-quarantine, umsebenzi, ukutyelela esibhedlele, ukuhlala ixesha elide okanye elifutshane. Sisebenzisa imigaqo ye-Covid kunye nezikhokelo zokucoca ngokunxiba imaski kwiindawo zethu zoluntu.
Kuya kuhlala kukho umntu okhoyo apha ukuze aphendule imibuzo yakho malunga nommandla wendawo kwaye akhombe kwicala lezona mpawu zibalaseleyo zefolkestone kufuneka zinikeze. Kwakhon…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Capel-le-Ferne